April 17, 2021 Xuseen 23
Puntlandtimes (MUQDISHO)-Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, oo uu weheliyo Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta hortagay Golaha Wakiilada ee Dowladda Puntland.
Madaxweyne Deni ayaa golaha la qaatay xogwareysi iyo wadatashi ku saabsan xaaladda dalku marayo iyo mowqifka Dowladda Puntland ee ku aadan muddo kordhinta sharci darada ah ee uu sameystay Madaxweynihii DFS ee Wakhtigu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Dhanka kalena, golaha wakiilada ee dowladda Puntland ayaa dood-dheer ka dib cod u qaaday muddo kordhinta aan sharciga aheyn ee Golayaasha Dawladda Federalka Soomaaliya. Fadhiga maanta oo ay joogeen 52 Xildhibaan ayaa waxaa u codeyay Ogol 49 Xildhibaan, Diidmo 1, Aamus 2 Mudane.
Wakiilada Shacabka puntland ee sharafta badnaa way hadleen waliba sibuuxda ayay utaageeren mudada 2 sano ee lagu diyaarin doono doorashada somalia ee qof iyo cod ahaa . Deninow adiga iyo figradaada waa ku keligaa kkkkkk
Wakiilada Shacabka puntland ee sharafta badnaa way hadleen waliba sibuuxda ayay utaageeren mudada 2 sano ee lagu diyaarin doono doorashada somalia ee qof iyo cod ahaa .
Farmaajo wiilka yar oo dhowr gaari iyo waardiye wata buu 5 berri la xarbinayaa, muxuu Alshabaab dal ka xoreeyaa, mideeda kale dadkii lahaa Siciid Deni iyo Axmed Madoobe baa la soo xiri ku quusta awood iyo karti darada Farmaajo iyo kooxdiisa fudaydka badan.
Kenya la weerarayaa, ilaa Nairobi baa la qabsan.
Haliye @@ waxaa la weeraraa cid Qatar loo arko , ee ninkaan xilkii iyo xidigihii laga xuyuubiyay, xaar kasoc cabsi uu qabo dartii marba meel u guur gurahaya. Dowlad way kafac weyn tahay in ay weerarto . Kkkkkk
PUNTLAND,Golaha Baarlamaanka la soo magacaabo iyo Deni.
Runtii dhacdooyinkii sharci darada ahaa ee uu Deni ku sameeyey gilsgaadi ayaa ka dhigay mid magac u yaal ah.
Waa tan horee weerarkii Deni ku qaaday 6 November 2019 oo ahaa faldanbiyeed aan wax ba la iska waydiin,askar iyo in shacab ah bay dileen askartii ilaalada Deni ee Madaxtooyada,taa waxaa xigtay in gudoomiye dhoobo daareed,di aan sharci ahayn Deni iyo kooxdiisa ay idka 24 sacadood gudahood oo Deni ka dhigay Gudoomiyaha golaha Baarlamaan ka ninkaasi waa Abwaan waa nin heesaa ah,waxaa arintaasi dheegay mudane Faroole oo iminka awood dheei ah oo la soo baxay,taasina waa mid u baahan in laga hadlo.
Waxaa iyana jirta fadeexadii uu Deni 8 Xildhibaan si sharci dara ah oo Baarlamaan ka uga saaray.cidina waxba kans oran.
Gunaanadkii maantay Puntland gole Baarlamaan oo si buuxda oo sharci ah u shaqeeya ma jiro,waxa jooga waa shinbirayahow heesa,waxaa intaa u dheer waa laaluush qaatayaal aan habyaraatee aan wax sharaf ah lahayn.
Waxaa runto tahay in Baarlamaan federaalka oo maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhan ay wakiilo ku leeyihiin wixii ay isko raacaan in uu yahay sharci Dalka Soomaaliya oo dhan lago maamulayo.
Deni iyo Madoobe iyo inta yar ee la xulufada ah waa laga guulaysan taariikhda oo ah mid aan cidana u hiilin ayaa qori dhacdooyika guracan oo ay maleegayaan Deni iyo Madoobe.
Puntland guul, horumar cadaalad,sharciga oo sareeya iyo madax ka duwan kuwa iminka maamula Puntland oo ah koox soo ganacsitagtay.
Ciyaal Bermuuda says:
Marka hore Farmaajo markii uu wareejiyay Dhalashada Mareykanka ayaan ogaa inuu dulmi soo wado iyo xukun jaceyl,midda xigta farmaajo dalka Soomaaliya kuma dhaqo Shareecada Islamka,Sharcigii shisheeyaha u soo qorayna ee Dimuqraadiyada aheyd 4tii sanno in doorosho la sameeyane ma rabyo, sababta oo ah wuxuu ogyahay in uusan mar labaad soo laaban doonin, sidaas daraadeed ayuu wuxuu saaxiibo ka dhigtay Itoobiya iyo Eritrea,wuxuuna sameystay ciidamo Tolkiisa ah iyo calooshood u shaqeystayaal oo uu Shimbir iyo Qooleey iyo Mukulaal uu u bixiyay si uu meesha u sii fadhiyo, Farmaajo wuxuu wataa hadalkii ahaa Cadkaan ku calfayay ama ku cideeyee, laakiin wuxuu ilaawsan yahay kuwii ka horeeyay ee qabqablayaashii dagaalka ahaa in Ciidaas 2da Mitir laga hoos mariyay, dhibkoodane laga nastay,farmaajo ne jidkaas ayuu mari doonaa. teeda kale dadka dega Mogadishu waa duud weyn yihiin sida ay ku kacaan ay adagtahay, laakiin maalintii ay kacaan waxaa xaqiiqa ah farmaajo in uusan Xamar sii joogi doonin, Siyaad Barre dulmi iyo caburin ayuu ku haayay Soomaaliya oo dhan 21 sanno, markii uu xukunka qabsaday dadka uu qaarijiyay ee uu dilay waxaa ka mid ahaa Salaad Gabeyre oo u dhashay degaanka Xamar, markaas ayaa la rabay Xamar inuu ka dhaco Kacdoon,laakiin waxay ku qaadatay 21 sanno, Maantana Farmaajo jidka Siyaad Barre ayuu haayaa,wuxuuna Soomaaliya u wadaa dagaal ahli, laakiin wuu ka shaleyn doonaa Adduun iyo Aakhiro.
FARMAAJO WAA NAF LA CAARI, TEENDHADII
AFISIONE AYUU ISKA XAADIRIYAY SAAKA.
SAADIQ KALIYA AYAA KU FILAN FARMAAJO.
FARMAAJO WAX UU DHUUSO MOODAYAY AYAA XAAR KU NOQDAY.
Puntland wali go’aan mey gaarin sababtoo ah United Arab Emirates ayaan qoraalkii soo gudbin ay Soomaali kaga go’i laheyd.
Mar hore ayaan idiin sheegay ciyaaal, Binti girl , go,aan ma qaadan karto ma goosan karto , waa maamada Fedraalka naag bari , in la furo marbto.. waxay daa waa Gunuuunuc.
Binti girl.. waa naag bari weyn , Goaaan ma laha.. in la furo ma rabto… waxay wadaa Gunuuunac , Yuuuus.
Naaska weyn aaan kuu salaaxo.
Binti girl.. waa naag bari weyn , Go,aaan ma laha.. in la furo ma rabto… waxay wadaa Gunuuunac , Yuuuus.
Binti girl…. naaa tag ama joog ama Xaarmaajo raac.. Yuuska & Gunuunaca. joooji.
Afxumaddu ma haboon a reer puntlandi waxay eegayaan waxa ay yeelaan reer muqdisho iyo beesha lixaad markaasay go’aan kama dambeys ah ay gaarayaan.
Waa sida aan kuu sheegay. Binti girl, go,aan ma gaari kadho.. Muuqdisho ayay war sugaysaa.
Waa sida aan kuu sheegay. Binti girl, go,aan ma gaari kadho.. Muuq disho ayay war sugaysaa.
Bint girl… ama sida Somalind go,aan gaaaar oo gooso.. ama Gunuuca & Yuuska naga daa Xabiibi.
Car.. Binti girl Go,aan ha gaadho.
Shire Soomaliya says:
# Soomaalia waxey leedahey xuduudo cayiman,oo cadcad # Farmaajo ma waxuu dhisi kari la yahey gudidada ilaalada xuduidada Somaliyeed.
GIXS waa siyaasada dhabta ah ee Somaliya looga saari karo faqriga
#Somaliland #Jubaland #Hirshabeele #Galmudug #Koonfur galbeed #Puntland
#Farmaajo ma waxuu dhisi layahey Gudidada teesaro minishoobayada Somaliyeed #Gudida teesaro minishiibiyada Somaliland
#Gudida teesaro minishiibiyada Jubaland….
#Gudida teesaro minishiibiyada Puntland…..
#Gudida teesaro minishiibiyada Galmudug….
#Gudida teesaro minishiibiyada Hirshabeele……
#Gudida teesaro minishiibiyada Koonfurgalbeed……
PUNTLANDTINES waxaa qorey siyaasada cadcad ee Somaliya looga saari karo faqriga gaajada ito xagjirka Soomaaliyeedku ha midoobo.
Runtii waxaad tahay,baa lagoo sheegi ( Homosexual) qomo luudh,rag magacii sita.
Puntland Shacabka degan ee Soomaaliyeed waa dad sharf iyo haybad ALLE siiyey,afkaaga xun ka daa,uskakyahay raga magaciisa leh.